Thwebula ePSXe 2.0.5 – Vessoft
ePSXe – a software ukudlala application of the game console Sony PlayStation kukhompyutha yakho. ePSXe ikuvumela ukuba ukugijima CD of game console nezithombe zabo ukuthi zigcinwa drive kanzima. Isofthiwe isebenzisa izithasiselo eziningi futhi amamojula ukudlala imidlalo nezimo maximally eduze game on a console. ePSXe ikuvumela ukuba ugcine noma ukulayisha imidlalo kusukela endaweni Ukukhipha futhi asebenzise aphambe ezahlukene vesi lula of imidlalo. EPSXe iqukethe amathuluzi ukulungisa nabaqondisi kanye control makhi keyboard.
Izinga okusezingeni of ukulingisa abanye of imidlalo
Run game akwazi ukugcina kanye disc images
Anezele abaningi modules
Amathuluzi ukumisa abalawuli
Amazwana on ePSXe:
ePSXe Ahlobene software: